कार्बन फुटप्रिन्ट के हो र यसलाई कसरी कम गर्ने बेजिया
Susana Garcia | 15/05/2021 10:00 | जीवन शैली
संग वातावरण को लागी नयाँ चुनौतिहरु नयाँ सर्तहरू र धेरै सन्देह पनि उनीहरूको वरिपरि उत्पन्न हुन्छन्। यस पटक हामी एउटाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं जुन प्राय: उल्लेख गरिएको छ कार्बन पदचिह्न। हामीले सोच्नु पर्छ कि यो शब्दले कम्पनीहरू वा कुनै व्यक्तिलाई पनि सन्दर्भ गर्न सक्छ, किनकि यसले व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिन्टको बारेमा पनि कुरा गर्दछ। यो एक विचार हो जुन धेरै कुरा गरिन्छ र यसले हामीलाई गतिविधिहरूबाट ग्यासहरूको उत्सर्जन मापन गर्न मद्दत गर्दछ।
भित्र हेरौं त्यो कार्बन फुटप्रिन्ट के हो? जसको हामीले धेरै कुरा सुनेका छौं, यो कसरी उत्पादन हुन्छ र विशेष गरी हामी यसलाई बढ्नबाट रोक्न के गर्न सक्छौं। ठूलो कार्बन फुटप्रिन्ट छोड्नाले केवल प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको गतिलाई सहयोग गर्दछ।
1 कार्बन फुटप्रिन्ट के हो?
2 कार्बन फुटप्रिन्टले कसरी प्रभाव पार्छ
4 कम मार्क छोड्न सिक्दै
कार्बन फुटप्रिन्ट के हो?
हामीले तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेका छौं पारिस्थितिक पदचिन्ह, तर अब यो कार्बन फुटप्रिन्ट हो। कार्बन फुटप्रिन्टको परिभाषा त्यस्तै हो 'सबै ग्रीनहाउस ग्यासहरू एक व्यक्ति, संस्था, घटना वा उत्पादनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा उत्सर्जित हुन्छन्'। यो परिभाषा हामीलाई स्पष्ट छ कि यो सबै चीजमा लागू गर्न सकिन्छ, किनकि ठूला कम्पनीहरूबाट हामी आफैंमा हामी दैनिक क्रियाकलापको साथ हाम्रा गतिविधिहरू प्रति वातावरणीय प्रभाव सिर्जना गर्दछौं, जेसुकै भए पनि। यी ग्याँसहरू, मुख्यत: सीओ २, वायुमण्डलमा उत्सर्जित हुन्छन् जुन पृथ्वीले उत्सर्जित गर्मीको केही अंश राख्छ र विश्वव्यापी तापक्रम बढाउँदै जान्छ। एक व्यक्ति जो अधिक उत्पादनहरू खान्छ वा कारको धेरै चीजको लागि धेरै प्रयोग गर्दछ हाम्रो कार्बन पदचिन्ह अन्य व्यक्तिको भन्दा धेरै ठूलो बनाउँदछ। प्रदूषण र ग्लोबल वार्मिंगमा प्रत्येकले के प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा विचार गर्न यो एक राम्रो सुरूवात बिन्दु हो।
कार्बन फुटप्रिन्टले कसरी प्रभाव पार्छ
मानव जगत अन्ततः ग्लोबल वार्मिंग प्रक्रियाको लागि जिम्मेवार छ जसले हाम्रो ग्रहलाई नष्ट गरिरहेको छ। यदि हामीले भर्खरका वर्षहरूमा बढेको यस समस्यालाई रोक्दैनौं भने त्यहाँ यस्तो बिन्दु आउँछ जुन अब उल्टो हुनेछैन र नतिजा पृथ्वी र मानिस र यसमा बस्ने सबै प्राणीहरूको लागि विनाशकारी हुन सक्छ। । यसैले यो आवश्यक छ कि हामी यसको बारे सचेत हुनु र सुरु गर्न आवश्यक छ वातावरणमा CO2 को उत्सर्जन रोक्नुहोस्। उत्सर्जित यी ग्यासहरूले एक लेयर बनाउँदछ जसले न केवल तातोमा पर्ने गर्दछ, तर ओजोन तहलाई बिगार्दछ जसले हामीलाई सुरक्षित गर्दछ।
कहिलेकाँहि हामी सोच्छौं कि जलवायु परिवर्तनको ठूला अपराधीहरू ठूला कम्पनीहरू हुन्। यो स्पष्ट छ कि यो उपभोक्तावाद केवल ठूलो जन निर्माणको साथ सम्भव छ ग्लोबल कम्पनीहरु कि धेरै ग्यास उत्सर्जन र अत्यधिक प्रदूषणकारी छन्। तर अन्तमा ती मानिसहरु जसले अधिक र अधिक उपभोग गर्न चाहान्छन् मानव हुन्, जो जीवनको एक प्रकारको बानी भएका छन् जसमा हामी केवल के खान्छौं। यदि हामी कम्पनीहरूले उपभोक्ताको ख्याल नगर्ने कम्पनीबाट उपभोग गर्छौं भने हाम्रो पदचिह्न पनि ठूलो हुनेछ किनकि हामी प्रदूषण वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछौं। हाम्रो दैनिक बानी, हामी उपभोग गर्छौं र खरीद गर्छौं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रह लाई प्रभावित गर्दछ र हामी एक व्यक्ति पनि एक ठूलो कार्बन पदचिह्न हुन सक्छ कि सचेत हुनु पर्छ। तर उहि समयमा हामी आफ्नो पदचिन्ह कम गर्न सक्दछौं यदि हामी हाम्रो बानी बदल्छौं भने।
कम मार्क छोड्न सिक्दै
हाम्रो दिनमा आज हामी धेरै चीजहरू गर्न सक्छौं जुन प्रदूषण गरिरहेका छन्। हामीले उपभोक्तावादको ज्वरोलाई रोक्न हामीले उपभोग गर्ने सबै कुराको समीक्षा गर्नै पर्छ। हाम्रो दैनिक दिनको लागि आधारभूतहरू प्रयोग गर्नुहोस् र प्रदूषण गर्ने कम्पनीहरूबाट खरीद गर्नबाट जोगिनको महत्त्वका बारे सचेत हुनुहोस्। साथै यदि हामीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्‍यौं वा साइकल चलायौं वा छोटो दूरीमा हिंड्यौं भने कारको प्रयोग पनि कम गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » कार्बन फुटप्रिन्ट